AMISOM oo oo diyaarado ay ku dagaal gasho kasoo iibsatay Ruushka Shaaficiyah.com � Arts-Osmanart
AMISOM oo oo diyaarado ay ku dagaal gasho kasoo iibsatay Ruushka AMISOM ayaa waxaa la sheegay in diyaarado dagaal oo ay kula dagaalanto Al Shabaab in ay kasoo iibsatay dowladda Ruushka.
In ciidamada AMISOM si rasmi ah loogu wareejiyo diyaaradaha ayaa waxa ay ku xiran tahay in laga helo ogolaashaha QM iyo Midowga Africa si ay Diyaaradahaasi dhanka hawada uga Caawiyaan Duulaanka lagu qaadayo Magaalada Kismaayo oo ka mid ah goobaha Al-Shabaab uu kasoo galo dhaqaalaha ugu badan.
Wasiirka Difaaca Kenya Yuusuf Xaaji oo dalkiisa uu qeyb ka yahay Howlgalka AMISOM ayaa sheegay in Ethiopia ay isku afgarteen in Soomaalia iyo Wadamada kale ee geeska Africa laga dhiga goob nabdoon oo aysan Xubnaha Al-Qaacida ee Xarakada Al-Shabaab ka barbar dagaalama ay raad ku laheen.
Waxa aan guul ka gaarnay Howsha ilaa iyo xad wanaagsan lkn shaqada ma aan dhaneystirin waxaan rabaa Al-Shabaab iney fahmaan in dhamaanteen aan isku kaashaneyno sidii aan uga xoreyn laheyn Ciida Soomaalia ayuu yiri Yuusuf Xaaji.
Dowladaha Ethiopia iyo Kenya ayaa dhawaan kala saxiixday heshiis ku aadan la wareegitaanka magaalada Kismaayo oo ay ku xoogan yihiin Al Shabaab. Xaafiiska Wararka Warlalis.com